WAREYSI: Macallinka Real Madrid oo ka hadlay natiijadii ay ka heleen Man City, haddana weeraray Bellegrini, kana jawaabay Xan ah in Ronaldo iyo Benzema ay seegi doonaan lugta 2-aad. | Haqabtire News
WAREYSI: Macallinka Real Madrid oo ka hadlay natiijadii ay ka heleen Man City, haddana weeraray Bellegrini, kana jawaabay Xan ah in Ronaldo iyo Benzema ay seegi doonaan lugta 2-aad.
Macallinka Real Madrid ayaa kadib cayaartii bar-barraha ku dhamaatay ee Man City la hadlay Atresmedia:Muhiimadda ayaa ah inaan nagala badinin, natiijo fiican ayaan heysanaa, waxaan sidookale ognahay in fursadda labada koox ay tahay 50-50″.
” Diyaar-garow xoggan ayaan geli doonaa si aan ugu soo baxno finalka Champions League-ga, waana ku qanacsanahay qaab cayaareedkii aan la nimid kullankii Man City”.
Zizu oo ka hadlaya Cristiano Ronaldo oo dhaawac ku maqan ayaa yiri: “Xanuun ayuu dareemay intii aan ku jirnay tababarkii ugu dambeeyay ee kahor City,muhiim ma aheyn inaan halis gelino xaaladdiisa. Waxaa ku dadaaleynaa inuu dheello lugta labaad ee garoonkeena”.
Macallinka Real oo sidookale ka hadlaya Karim Benzema ayaa yiri: Dhaawac ayuu ku dheelayay, taasoo sababtay inuu sii wadan waayo cayaarta, sababtaas ayaana u baddelay,- aan arragno haddii uu dheeli doono lugta 2-aad iyo in kale”.
” Waxaan jeclahay in Ronaldo iyo Benzema ay dheelaan lugta 2-aad, laakiin ma hubo oo ma xaqiijin karo haddii ay taam u noqon doonaan kulankaas, shaki ayaa iiga jiro.
Zinedine Zidane oo ka jawaabay hadal uu yiri Pellegrini oo ah in Real ku qanacsan tahay bareejo ayaa yiri” Waa been Real waxay mar waliba dooneysaa inay badiso, qeybtii 2-aad sidii aan u galnay Man City malaha uma jeedin macallinkeeda”.